तपाईं के कोरोना भाइसबाट बिरामी हुनुहुन्छ ? वा त्यस्ता बिरामीको उचारमा खटिनुभएको छ ? दुवै छैन भने मास्क नलगाउनुहोस्।
‘हामी सबै जानकार हुनै पर्छ’, मारियाको भनाइ थियो, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि मास्क, पञ्जा, गाउनलगायत सुरक्षा सामग्री अभाव थामिनसक्नु छ। यस्ता सामग्री प्रयोगको प्रमुख हक उपचारमा खटिनेहरूलाई हुन्छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।